Himalaya Dainik » टोखामा दम्पतीको शंकास्पद मृत्यु: घटना थप रहस्यमय
तारकका छोराबुहारी उमेश र सुदीक्षा शुक्रबार राति टोखामा मृ-त फेला परेका थिए। तारक छोराबुहारीको कि-रियामा बसेका छन्। कि-रियापुत्री भवनमा कोठाबाहिर उमेशको फोटोमा माला चढाइएको थियो। नजिकै दियो बलिरहेको थियो। बुहारीको फोटो नभएकाले ल्याउने तयारी भएको उनले सुनाए।
उनले उमेश परिवारसँग अलग्गिएर बस्नुको कारणबारे भने, ‘सायद उसलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्ने इच्छा थियो। हामीले जबर-जस्ती गरेनौं। ऊ राम्रैसँग बसेको थियो। टोखा बसे पनि आउजाउ गथ्र्यो।’
डीएसपी खड्का मेरै विद्यार्थी रहेछन्। मैले फोन गर्न पनि हिम्मत गरेको छैन। अनुसन्धानमा राम्रै दख्खल राख्ने केटो हो। यो घ-टनाको पर्दापछाडि को छ ? त्यो बाहिर आउने आस छ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानका नाममा बुहारी (सुदीक्षा)ले उमेशको ह-त्या गरेर आफूले आ-त्मह-त्या गरेको बुझाइप्रति उनले असहमति जनाए। ‘यो काल्पनिक कुरा मात्रै भएन र ? मा-रेको र म-रेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी कोही छ ?’, उनले भने, ‘अब प्रहरी अनुसन्धानले देखाउला सत्यतथ्य के रहेछ।’
हामीलाई त क्यानडाबाट सूचना आएको हो।’ १२ घण्टापछि मात्रै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी पाउनु, शर्मिलाले प्रहरीमा तत्काल खबर नगर्नु, क्यानडासम्म घट-ना थाहा पाउनु
सुदीक्षाका माइती अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। उमेशका परिवारजनले सुदीक्षाकी दिदी शर्मिलालाई मात्रै चिन्छन्। तिनै शर्मिला प्रहरी र उमेशका परिवारको शंकाको घेरामा छिन्।
‘शुक्रबार बिहान साढे ६ बजे शर्मिला उमेशको कोठामा पुगेर घ-टना देखेपछि प्रहरीलाई किन खबर गरिनन् ?’, उमेशका दाजु हिमेशले भने, ‘हामीलाई त क्यानडाबाट सूचना आएको हो।’ १२ घण्टापछि मात्रै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी पाउनु, शर्मिलाले प्रहरीमा तत्काल खबर नगर्नु, क्यानडासम्म घट-ना थाहा पाउनु, हिमेशका परिवारले उमेश र सुदीक्षाको श-व अस्पताल पुगेपछि मात्रै थाहा पाउनुले घट-ना शं-कास्पद रहेको बुझाइ प्रहरीको छ।
क्यानडाबाट शर्मिलाकै आफन्तले एक पूर्वसुरक्षा अधिकारीलाई फोन गरी जानकारी दिएपछि आफूहरूले थाहा पाएको हिमेशले बताए। उमेश र सुदीक्षाको श-व पोस्ट-मार्ट-मका लागि टिचिङ अस्पताल पुर्‍याइसकेपछि आफूहरू त्यहाँ पुग्दा मु-र्छित भएको उनले सुनाए।
भाइलाई बुहारीले नै मा-रेको प्रमाण के छ र ? कि त प्रहरीले त्यो पुष्टि गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘होइन भने अर्को पक्ष को संलग्न छ ?
‘धेरै कराएपछि भाइबुहारीको श-व हेर्न दिए। भाइ घोप्टो अवस्थामा थियो। टाउकोको पछाडि भागमा गहिरो चो-ट थियो’, उनले भने, ‘भाइको श-व ग-न्हाउने भइसकेको थियो। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट आएपछि थाहा भयो, धा-रिलो ह-तियार प्रहारबाट भाइको मृत्यु भएको र बुहारीको झु-न्डिएर।’
पोस्ट-मार्टम रिपोर्टअनुसार उमेशको मृत्यु २४ देखि ३६ घण्टा र सुदीक्षाको मृत्यु १२ देखि २४ घण्टाको बीचमा भएको देखिन्छ। ‘भाइलाई बुहारीले नै मा-रेको प्रमाण के छ र ? कि त प्रहरीले त्यो पुष्टि गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘होइन भने अर्को पक्ष को संलग्न छ ? त्यो पत्ता लगाइदिनुपर्‍यो।’ शुक्रबार शर्मिला र सुदीक्षाबीच फोनमा लामो संवाद भएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ।
ग-र्भवती थिइन् सुदीक्षा
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा श-व पोस्ट-मार्टम गर्दा सुदीक्षाको ग-र्भमा दुई महिनाको बच्चा रहेको पाइएपछि परिवारका सदस्य झन् मु-र्छित भएका छन्। उमेश अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएको चार महिना भएको थियो। उनी फूलपातीका दिन नेपाल आएका थिए। जनवरी १४ मा अमेरिका उड्ने तयारी थियो।
‘बच्चा पाउने तयारीबारे उमेशले परिवारका कसैलाई जानकारी दिएका थिएनन्। हाम्रो शं-का ग-लत पनि हुन सक्छ’, हिमेशले भने, ‘कतै त्यही बच्चा पाउने वा नपाउने विषयलाई लिएर पो घट-ना भएको थियो कि !’
उमेश र सुदीक्षाबीच ६ वर्षअघि विवाह भएको थियो। बिहेमा सुदीक्षाका परिवारबाट शर्मिला र उमेशका तर्फबाट हिमेश मात्रै थिए। ‘उनीहरूले एकले अर्कोलाई मन पराए। बिहे गर्ने भनेपछि सहमतिमै गराइदियौं’, हिमेशले भने, ‘सम्बन्ध राम्रै थियो। एकाएक यो घट-ना आइलाग्यो।’
टोखा घट-ना अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका गरी चार टोली खटिएका छन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट सुदीक्षा र उमेशका मोबाइल, सिलौटा, लोरोलगायत सामान बरामद गरेर प्राविधिक पक्षबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले घ-टनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुदीक्षाले उमेशको ह-त्या गरी आफूले आ-त्मह-त्या गरेको देखिए पनि अन्य पाटोबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘हामीले विभिन्न प्राविधिक पाटोबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं। जे हो त्यो तथ्य बाहिर ल्याउँछौं’, एसएसपी अशोक सिंहले भने।
गत शुक्रबार राति टोखास्थित ग्रान्ड भिल्लामा रहेको अपार्टमेन्टमा उमेश र सुदीक्षा मृ-त फेला परेका थिए। यो खबर सुवास गोतामेले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।